10 Iimvumi zeVidiyo eziNtsholongwane ze-Kids Dancing
Ezi zintsana ziyakhupha ukuhamba kunye neyona nto ibhetele.
Kukho ininzi yevidiyo ezinobomi be-viral kwi-intanethi, kodwa into encinane ngokubetha imnandi ngakumbi kunokuba " uCharlie Bit Bit My " kwaye yatshitshisa abantwana ababenokuhlinzwa nje kwamazinyo . Ngokomzekelo, khangela iividiyo ezi zihlanu ezilandelayo zezingane ezincinci zihla kumgangatho wokudanisa.
Owe, kwaye xa usuqedile ukuhleka NABANTU bodansa, hamba u- T ezi ntwana zineenwele ezinqwenela ngokwenene . (Ukuba uziva uhlekile ngenxa yokuhleka, unokuhlala uhlola abo bantwana abaye benza izidlo ezikhulu kunabo bonke okwenziwe ngabazali babo emva kokuba bahlekisiwe, ndiyathembisa!)
"Udansa Njengomntu Wonke Ukhangele"
Nge-Facebook / George Takei.
UGeorge Takei wabelane ngale vidiyo yenkwenkwe encinci ikhankanya ngasemva emva kokudlala nje i-Just Dance kwivenkile. Le nyana inqoba wonke amanqanaba! Kaninzi "
Intombazana Inokunyusa Umdlalo Wodumo WobuGcisa
Ngethuba lokudanisa umgca weStephen Sondheim we-classic Broadway Baby , enye intombazana inqumle ukwenza ikheyibhile yakhe ekhethekileyo. Ngethuba abanye abantwana bebethelela ngendlela yabo behamba ngeenombolo zomculo, le ntsana enye inqabile ukunyuka kwaye yanyathelisa abaphulaphuli.
Inxalenye eyona nto kukuba waguquzela i-blonde encinci ecaleni kwakhe kumntu ongenamntu ongenamntu, ngokuqinisekileyo kwisihlwele.
Le vidiyo ilindelwe ama-5.6 yezigidi ngezihlandlo ngonyaka walo wokuqala kwi-intanethi, kwaye ngesizathu esihle. Akunakwenzeka ukuba uncumo xa ubukele lo mntwana! Kaninzi "
'Iintsana Zizidlwengulo Ezingcono Kunoko' Ukuhlanganiswa
Le vidiyo ye-4 yokuhlanganiswa yimizuzu ibonwe ngaphezu kwezigidi ezili-16, kwaye kulula ukubona isizathu sokuba! Ezi zintsana zidibene, ungadinga ukukhupha i-insulin yakho ngosuku. Khangela yonke i-clip ye-instant pick-me-up. Kaninzi "
Ukudibanisa no-Lady Gaga's "little monster"! Ingane kule vidiyo iyinkohlakalo kakhulu njengoko ibeka i-paws yayo kwaye ikhuphe ngokukhawuleza ukuya kwi-Gaga ye-hym's hit this Born . Akayena nje ngokuziqhayisa kuyo, kodwa umdaniso wakhe uhamba ngokwenene.
Kananjalo ulawula ukudibanisa kwakhe phakathi kwento ekhangele ukuba ibe yikhonsathi yangaphandle yenkampu, ngoko kukho abantu abajikeleza phambili naphambi kwesiteji ngamaxesha onke. Ufumana isikhokhiso esongezelelweyo ngokuxhalabisa kakhulu. Kaninzi "
Imidaniso yaseBantwana "Bonke abaLadies Single"
Kubonakala ngathi neentsana ziyaqaphela ukuba uBeyonce uyatshisa kakhulu. Le vidiyo yentsana yokutshiza i-diaper ibingela phantsi kwaye inyikima ixhoba layo kwividiyo ye-Beyonce's Single Ladies ilungile kwaye iyamangalisa.
Mhlawumbi uMnin Kanye West wayechanekile xa wayidla ngokuphazamisa u-Taylor Swift ukuvakalisa oku, "enye yevidiyo yomculo yexesha lonke" kwi-VMS ka-2009. Kucacile ukuba lo mntwana uyanandipha! Kaninzi "
Mhlawumbi Umdiliya Olungileyo kakhulu
I-Jumbo Tron kumdlalo weMiami Marlins wathatha omnye umfana omncinci othe wagqiba ukuhamba ngeentambo ngokudansa kwakhe xa ebona ekhamera. Ngenxa yoko, umntu uthathe isikrini ekubanjweni kwithelevishini waza wajika ibe yiVidiyo yeVine ebonisa ukuhleka kweminye imizuzwana eyisithupha kunezinye iibhloko ezikhuselekileyo ezinokuthi zidibanise kwiiyure eziliqela.
I-gyrations! Ulwimi! Le nyana iphosa, kodwa ngendlela engcono kakhulu. Kaninzi "
Intshontsho Yomntwana I-Show From 'Spandy Andy'
NgeLove Live Leak.
E-Edinburgh, eScotland, ngokucacileyo kukho umenzi wesitalato ogama linguSpandy Andy owenza abantu baxake umdaniso wokunyakaza, bonke bebhince kwixabiso elincinci le-spandex. Kule vidiyo ephilileyo, u-Spandy Andy (ndiziva ndihlaziye kwaye ndiyibhala igama) wenza i-thang yakhe xa ebona umntwana ephethe unyawo lwakhe kwaye ekhanda intloko yakhe kumculo. Umqhubi uletha inkunzi yakhe kwisenzo sakhe, kwaye kunye bayayigxotha emininzi imizuzu, kude kube yilapho ekugqibeleni, umntwana uhamba-udansa uchwepheshe.
I-Chubby Indian Kid iyazi indlela yokuSebenza ngayo
Ngubani phakathi kwethu ongazange adlale ngaphakathi kwiingubo zethu zangaphantsi kanye okanye kabini? Ababukeli abangaphezu kwezigidi ezisibhozo baye banandipha le ntshontsho enomtsalane umenzi wakhe wemali, kunye nesizathu esihle! Into ayenayo kumdaniso uyenza ngenxa yokuzimela, ukungazithembi. Kaninzi "
Ukuncokola kweNtsana Yomntwana kwiCue
Nge-YouTube / FunelVision.
Lo mntwana uneminyaka engama-9 kuphela ubudala, kodwa xa loo mculo iqala ukudlala ayinakunceda kodwa qalisa u-boogie! Kaninzi "
I-Vietnamese Kid ibonisa i-Stylin 'Dance Moves
Jongana nayo: Asisoze sipholile njengoko le nkwenkwana! Le dapper little dude yayiboniswe kwimiboniso yeTV yaseVietnam idansa kwi "Vu dieu cong chieng" nguToc Tien. Ividiyo ayisekho kwi-intanethi, kodwa unokwazi ukujonga isipho esilisayo apha.
Ukufumana umdla omncinci wokuzonwabisa, hlola ama-5 aMnandi kwaye anamantombazana aBantu abathanda ukuDansa.
20 Abantwana ababethelela i-Haircuts ezimbi kakhulu kwiSikole saSithombe soSuku
Abayi kuphinda bahlale le mifanekiso phantsi!
20 Ehlekisayo eLahlekileyo kwaye ifunyenwe